एमालेभित्र धाँजा बढाउने प्रचण्डका तीन बोली पार्टी एउटा, तीन समूहको आ–आफ्नै संरचना
–माधवजीहरू फर्किएपछि केपीले जे मन लाग्यो त्यो गर्न सक्ने छैनन् । त्यहाँ ठूलै झमेला हुनेवाला छ, मलाईचाहिँ माधवजीलाई कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्ने टेन्सन छ ।
हामीले सहकार्य रहिराख्ने, उहाँहरूले त्यहाँभित्र गएर संघर्ष गर्ने, फेरि एकताको प्रस्ताव राख्ने, फेरि एकतातिर नै हामी जानुपर्छ भन्ने हो । खासगरी पुस ५ गतेदेखि संसद् विघटनको प्रस्ताव राखिसकेपछि माधवजी र हाम्रोबीचमा जस्तो राजनीतिक, वैचारिक, भावनात्मक सम्बन्ध भयो । यो धेरै माथि पुग्दै थियो । त्यसलाई फेरि पनि एकतातिर नै लैजानुपर्छ भन्ने छ । जिल्लाका हाम्रा कुनै पनि गतिविधिले केन्द्रमा माधवजीहरूलाई पिन्च नहोस् । माधवजीसँग नजिक भएका मानिसलाई तानेर हामीभित्र घुसाइहाल्छु भन्नेतिर नलाग्नु होला । अहिले त्यसो गर्न आवश्यक छैन । (फागुन २८ गते बुटवलमा माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्ड)
–अप्ठ्यारो अलि परेको पूर्वएमालेका साथीहरूलाई हो । किनभने, माधवजी झलनाथजी र हामी हुँदा दुईतिहाइ बहुमत भइया थियो । नेकपा हुँदा केपी त वैधानिक ढंगबाट अध्यक्ष पनि हटे । पार्टीबाट पनि हटाइयो । अब प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउने अन्तिम तयारी भइराख्या थियो । देशभरि अभियानमा माधवजी र म त जतासुकै भाषण गर्दै हिँडियो, प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमन, यिनलाई चाहिँ जसरी पनि ठिक पार्नुपर्छ । जसरी पनि ठिक गरिन्छ भनेर हिँडियो । उहाँले अलि बढी नै (हाँस्दै), गाली गर्नेमा त मैलेभन्दा उहाँले अगाडि बढेर नै, गर्ने पनि कुरा आयो । अहिले फेरि एमाले बनाएपछि अहिले उहाँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ । फेरि कसरी मिल्ने ? त्यहीँ गएर संघर्ष गरेर फेरि एकताको वातावरण बनाउने भन्ने त थियो ।
फेरि केपी ओलीलाई के परेछ भने, यिनीहरू गइसके, सदस्यबाट निकालिसके, यिनीहरू आउलान् भन्ने उनलाई रहेनछ । प्रधानमन्त्री गए पनि यिनीहरू आउँदैनन्, मैले आफ्नो गुट बनाएर लान पाउँछु । माधवजीहरू गइदिएपछि त्यहाँ खैलाबैला परेको छ । यिनीहरू फेरि आए । यिनीहरूले झमेला गर्ने भए भन्ने परेको छ । त्यही भएर अस्ति फागुन २८ गते बसेर कार्यविभाजन गरेर, केन्द्रीय सदस्य पनि थपघट गरेर माधवहरूलाई वास्तै गरेनन् उनले । बाध्य भएर माधवजीहरू आफ्नो अलग्गै भेला, अलग्गै बैठक, अलग्गै दस्तावेज र आज राष्ट्रिय भेला हुँदै छ । उहाँहरूचाहिँ एकताकै निम्ति अगाडि बढ्नुहुन्छ । मलाई विश्वास छ, हाम्रो राम्रो कुराकानी भएकै हो । आन्दोलन सँगै मिलेर राम्रै गरिएको पनि हो, पछिल्लो चरणमा । अब त्यहाँभित्र उहाँहरूले संघर्ष गर्नुहुन्छ । अन्ततः कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने नै हुन्छ । (चैत ४ गते सिन्धुलीको खुर्कोटमा आयोजित कार्यक्रमा बोल्दै प्रचण्ड)
–अप्राकृतिक ढंगले विभाजित गरिएको पार्टीलाई पुनर्मिलन गराउन जरुरी छ । किनभने, यहाँ त कस्तो भयो भने, भएको त कस्तो भने, हाम्रो बडो लभ परिराख्या थियो, कुरा बुझ्नुभयो त ! दुईवटा पार्टीको लभ परेर देख्नुभयो नि, माघ २८ गतेको आमसभामा म कसरी बोलेँ, माधवजी कसरी बोल्नुभयो, झलनाथजी कसरी बोल्नुभयो लभ नपरेको भए त्यसरी बोलिन्थेन नि ! बडो लभ परेको श्रीमान्–श्रीमतीलाई त अदालतले जबरजस्ती डिभोर्स गरिदिन पाइन्छ त ! लभ परिरहेकालाई डिभोर्स गर्नु त प्राकृतिक हिसाबले पनि अन्याय हुन्छ नि । कतैबाट पनि मिल्ने कुरा हो त ? अहिलेचाहिँ दुलहा–दुलही दुईटै रुँदैरुँदै आ–आफ्नो ठाउँमा जानु परेको छ । त्यसो भएर मैले यसलाई अप्राकृतिक भनेको छु । (चैत २८ गते कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समितिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड)
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का एक महिनायताका अभिव्यक्ति हुन् यी ।
दोहोर्‍याइरहनु परेन, नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्ष अहिले उत्कर्षमा छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लै अघि बढ्न खोजेपछि एमाले २०५४ सालको नियति व्यहोर्ने अवस्थाको सन्निकट छ ।
प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको विग्रह, विद्वेषलाई झनै फराकिलो बनाइदिएको र धाँजालाई अझै फट्याउने काम गरेको टिप्पणी एमालेवृत्तमा भइरहेको छ ।
गत फागुन २३ गते एकता रद्द गर्दै पूर्ववत् पार्टीमा फर्काइदिएपछि एमालेको एउटा वृत्तले माधवकुमार नेपालहरूको घर फर्काइलाई संशयको आँखाले हेरेको थियो ।
पुस ५ गतेपछि ओलीविरुद्ध सडक–संघर्षको अगुवाइ गरेकाले इतर समूहले उनीहरू प्रचण्डको गृहकार्य बोकेर धुम्बाराही फर्किएको टिप्पणी नगरेका होइनन् । र, यसले ओलीलाई फागुन २८ गतेतिर अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको पनि नेता–कार्यकर्ताको बुझाइ छ ।
अहिले प्रचण्डले ‘गृहकार्य’लाई पुष्टि हुने गरी अभिव्यक्ति दिन थालेको र त्यसले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई झन् पेचिलो बनाएको एमालेका कार्यकर्ताले बुझ्न थालेका छन् ।
अनेरास्ववियूका पूर्वउपाध्यक्ष तथा सिन्धुपाल्चोकका नेता नवराज पौडेल अहिले जारी ‘डिभोर्सपछि लभ’को कुरा एकता नहोस् भन्ने दीर्घकालीन रणनीतिक हतियारबाहेक केही नभइको तर्क गर्छन् ।
“धेरैको मिसन एमालेले अंगीकार गरेकोे बाटो र त्यसले जनतामा स्थापित गरेको विश्वासको धरहरा भत्काउनु थियो । पहिले भिडेर र नसकेपछि मिलेर कमजोर बनाउने नियतले काम भयो । मिलेका नेतृत्वको बीचमा चुक्ली लगाएर, फुर्क्याएर अर्कोप्रति अविश्वास चुल्याइदिएर फुटाउने र ‘कब्जा’ गर्ने रणनीति केही मात्रामा सफल हुँदै गयो । अहिले जारी ‘डिभोर्सपछि लभ’को कुरा पनि एकता नहोस् भन्ने दीर्घकालीन रणनीतिक हतियारबाहेक केही होइन । भ्रमबाट मुक्ति र सत्प्रयत्नबाट एकताको मार्ग नै एक मात्र विकल्प हो । सबैखाले षड्यन्त्र र भ्रमलाई तोड्दै मनहरुलाई मुटुसँग जोडेर अघि बढौँ,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिँदै भन्छन् ।
तीन समूहको आ–आफ्नै संरचना
पछिल्लो समय पार्टी एकताबद्ध नै राख्नुपर्छ भन्ने आवाज बलशाली बन्दै गएको एमालेका नेताहरू बताउँछन् । २९ चैतमा त्यस्तै दृश्य सिन्धुपाल्चोकमा देखिएको थियो । जिल्लाको लिसङ्खुपाखर गाउँपालिकामा पार्टी कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रममा ओली र खनाल–नेपाल समूह एउटै मञ्चमा देखिएका थिए ।
पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य अरूण नेपाल र सरेश नेपाल एउटै मञ्चमा देखिँदा पार्टी एकताको भावना बलियो बन्दै गएको टिप्पणी तलका नेता–कार्यकर्ताले गरेका थिए । कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको पछिल्लो निर्णय र खनाल–नेपाल पक्षधर त्यहाँका मन्त्रीहरूको गतिविधिले पनि पार्टी एकता रहनुपर्छ भन्ने भावनालाई नै बलियो बनाएको नेताहरूको बुझाइ छ । तर, पार्टीभित्रको संरचनाले ती भावनाहरूलाई खारेज गर्छन् ।
पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष कलुषित बन्दै विद्वेष र विग्रहको रूप लिएपछि नेकपाभित्र अहिले तीन समूहको आ–आफ्नै संरचना छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले देशव्यापी समानान्तर संरचनालाई तीव्रता दिएका छन् । आइतबारसम्म उनीहरू ६० बढी जिल्लामा पुगिसकेका छन् । समानान्तर कमिटी घोषणा गरिसकेका छन् । आइतबार मात्रै निवर्तमान उपाध्यक्ष भीम रावलको संयोजकत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी घोषणा गर्दै छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ७ गते अलग्गै केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर पार्टीभित्रको संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेका थिए । फागुन २८ र चैत ७ गते दशौँ, एघारौँ र बाह्रौँ बैठक राख्दै पुरानै निर्णयमा टेकेर केही हेरफेर गरेका छन् । जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छन् ।
ओलीले प्रदेश नम्बर–को इन्चार्जमा सुवास नेम्वाङ, सहइञ्चार्जमा लालबाबु पण्डित, भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई, गुरु बराल, टंक आङ्बुहाङ (लिम्बु) र राजेन्द्र गौतमलाई चयन गरेका छन् । प्रदेश अध्यक्षमा देवराज घिमिरे र सचिवमा विनोद ढकाल नियुक्त गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर–२ को इञ्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल र सहइञ्चार्जमा लीला श्रेष्ठ तोकिएको छ । अध्यक्षमा प्रभु साह र सचिवमा सुमन प्याकुरेल चयन गरिएको छ ।
वाग्मती प्रदेशको इञ्चार्जमा रामबहादुर थापा, सहइञ्चार्जमा काशिनाथ अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई उपत्यकाको विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश अध्यक्षमा आनन्द पोखरेल र सचिवमा धादिङका खेम लोहनी चुनिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको इञ्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, सहइञ्चार्ज किरण गुरुङ, पद्मा अर्याल, लीलबहादुर थापामगरलाई बनाइएको छ । प्रदेश अध्यक्ष जगत विश्वकर्मा र सचिव गोविन्द नेपाली बनेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको इञ्चार्ज शंकर पोखरेल बनेका छन् । उनी नेकपा छँदा पनि सोही भूमिकामा थिए । सहइन्चार्ज मणिचन्द्र थापा, दलबहादुर राना, बैजनाथ चौधरी, गिरधारीलाल न्यौपाने बनेका छन् । प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरी र सचिव खेममान खड्का तोकिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्जमा यामलाल कँडेल र सहइञ्चार्जमा लक्ष्मी पोखरेल, गुलाबजंग शाह नियुक्त गरिएको छ । प्रदेश अध्यक्ष पूर्ववत् गोरख बोगटी र सचिव धर्मराज रेग्मीलाई बनाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको इञ्चार्ज लेखराज भट्ट बनेका छन् । सहइञ्चार्ज गणेश ठगुन्ना, नारदमुनि राना बनेका छन् । प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्रसिंह रावल बनेका छन् ।
पार्टी स्कुल विभाग केपी शर्मा ओली आफैँले राखेका छन् । संगठन विभाग विष्णुप्रसाद पौडेल, संसदीय मामिला सुवास नेम्वाङ, प्रचार प्रदीप ज्ञवाली, निर्वाचन विष्णु रिमाल, विदेश मामला डा. राजन भट्टराई, कोष तथा आर्थिक विष्णु रिमाल, केन्द्रीय कार्यालय महासचिव ईश्वर पोखरेल, जनवर्गीय संगठन, टोपबहादुर रायमाझी, सम्पर्क समन्वय छविलाल विश्वकर्मा प्रमुख बनेका छन् ।
खनाल–नेपाल समूहले पनि सातवटै प्रदेशमा अलग्गै जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रदेश–१ मा भीम आचार्य, प्रदेश–२ मा घनश्याम भुसाल, वाग्मतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनीमा युवराज ज्ञवाली, कर्णालीमा प्रकाश ज्वाला र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल संयोजक बन्दै छन् । जिल्ला र आधारभूत तहसम्मै समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने खनाल–नेपाल समूहको तयारी छ ।
यता, वामदेव गौतमले पनि एकता अभियानका नाममा अलग संरचना खडा गरेका छन् । गौतमले नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा हुँदा माघ १४ गते एकता अभियानको थालनी गरेका थिए । पछिल्लो समय दुई पार्टी अलग भएपछि एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने गरी अभियानलाई रूपान्तरित गरेका छन् ।
त्यो अभियानले ३१ बढी जिल्लामा कमिटी बनाइसकेको हरि पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार यो कमिटीले पार्टीभित्रको समूहहरूको एकताको पहल गर्नेछ । कथम् पार्टी विभाजन भए तत्काल बैठक राखेर अभियान स्थगित गर्ने र आफू कतापट्टि लाग्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने पनि उनी बताउँछन् ।
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका तीन नवनियुक्त मन्त्रीको सपथ अघि नै जिम्मेवारी खोसिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बुधबार प्रदेश सभासदस्यहरू विन्दमान... ७ मिनेट पहिले
काठमाडौं । नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहले आफूहरूले उठाएका विषयमा बलियो भएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार दिउँसो बसेको केन्द्रीय कमिटीको... ४९ मिनेट पहिले